पूर्ण बहुमत ल्याएर एक बर्षभित्रै संबिधान जारी गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता (अन्तरवार्तासहित) – Kathmandutoday.com
पूर्ण बहुमत ल्याएर एक बर्षभित्रै संबिधान जारी गर्ने प्रचण्डको प्रतिबद्धता (अन्तरवार्तासहित)
काठमाण्डु-एकीकृत नेकपा माओवादीले चुनावी घोषणापत्रलाई बुधबार अन्तिमरुप दिएको छ । उसले आफ्नो घोषणापत्रलाई ‘प्रतिबद्धतापत्र’ नाम दिएको छ ।पार्टी प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले घोषणापत्र तयार भैसकेको भन्दै यसलाई कहिले सार्बजनिक गर्ने भन्ने कुराको टुंगो लागिनसकेको बताए ।अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक बाबुराम भट्टराइले यसबारे जानकारी गराएका छन् । भट्टराईले सामाजिक सन्जाल ट्वीटरमार्फत् ५, १०, २० र ४० बर्षे आर्थिक विकासको मार्गचित्र घोषणापत्रमा समेटिएको जानकारी दिएका छन् ।
एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नो पार्टीले मंसिर ४ गतेको चुनावमा पूर्ण बहुमत ल्याएर स्थिर सरकार र संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्ने बताएका छन । अध्यक्ष प्रचण्डले चुनावमा एमाओवादीले प्रत्यक्षतर्फ एक सय पचास सिटसम्म ल्याउने आँकलन गर्दै समानुपातिकमा पनि धेरै राम्रो अवस्था हुने स्पष्ट पारेका छन । आफ्नो पार्टीले पूर्ण बहुमत ल्याएर एक वर्षभित्रमै नयाँ संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता पनि प्रचण्डले व्यक्त गरेका छन ।
कृष्ण सेन समाचार सेवाका लागि गोविन्द आचार्य, विष्णु सापकोटा र सूर्यकिरण शर्मालाई दिएको अन्तरवार्तामा प्रचण्डले भने “अहिले हाम्रा प्रतिद्वन्द्वीहरुले एक खालले हार स्वीकार गरिसकेको स्थिति छ । मैले थाहा पाएसम्म अन्तराष्ट्रिय शक्तिहरुका आ–आफ्ना बिश्लेषणहरु पनि एमाओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने निश्कर्षमा पुगेको देखिन्छ । मैले बुझेसम्म अहिले हाम्रो बहुमतलाई कसैले रोक्नै सक्दैन ।”
चुनावपछि स्थिर सरकार र जनपक्षीय संविधान निर्माणको नेतृत्व एमाओवादीले गर्ने बताँउदै अध्यक्ष प्रचण्डले भने“यसपटक नेपाली जनताले राजनीतिक स्थिरताको निम्ति र आर्थिक समृद्धिका साथै संविधान निर्माणको कामको नेतृत्वका लागि पनि एकीकृत माओवादीलाई पूर्ण बहुमत दिन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । हामीले बहुमतबाट सरकार बनाइसकेपछि हाम्रो ध्यान एकातिर संविधान निर्माण गर्नेमा हुन्छ भने अर्कोतिर आर्थिक समृद्धितिर हुन्छ । हामीले उत्पादन, विकास र निर्माणलाई अभियानको रुपमा लैजाने निर्णय गरिसकेका छौं ।”
अध्यक्ष प्रचण्डसँगको विशेष अन्तर्वार्ताको पूर्ण पाठ यसप्रकार छ–
मुलुक चुनावमा होमिइसकेको छ, तर मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीले चुनाव बहिस्कार भनेको छ । के उहाँहरुको बहिस्कारले चुनावलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ?
वैद्यहरुको बहिस्कार बेमौसमी, मनोगत र अवस्तुवादी छ भन्ने कुरा त्यसको जनतामा खास असर नपरेवाट प्रष्ट भइसकेको छ । अस्ति मनोनयन गर्ने दिनको परिदृष्य मात्रै हे¥यौ भने पनि जनता निर्वाचनको निम्ति बडो उत्साहका साथ सहभागी हुन चाहिरहेका छन् । यो संविधानसभाको निर्वाचन हो, जो माओवादी पार्टीले जनयुद्धमा निकै ठूलो त्याग गरेर प्राप्त भएको हो । त्यसकारण वैद्यजीहरुले बहिस्कार गर्नु यो भन्दा अवस्तुवादी र मनोगत अरु केही हुनै सक्दैन । यो उहाँहरुले चुनाव बहिस्कार गर्नुभएको होइन, जनताबाट नै आफूहरु बहिस्कृत हुनुभयो भन्ने मलाई लागेको छ । उहाँहरुले त्यसो नगरेको भए हुन्थ्यो । उहाँहरु सहभागी हुनुहोस् भन्ने हाम्रो चाहाना थियो । तर उहाँहरुको बहिस्कारले वस्तुतः खासै अर्थ राख्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । उहाँहरुले मनोगतरुपमा बहिस्कार गर्ने भनेदेखि केन्द्रीय समितिदेखि विभिन्नस्तरका उहाँहरुका इमान्दार क्रान्तिकारीहरु मूल घरमा फर्किने प्रक्रिया निकै तीब्र गतिले अगाडि बढेको छ । यो सबैले देखेकै कुरा हो । महेन्द्र पासवानदेखि केन्द्रीय र जिल्लास्तरीय नेता–कार्यकर्ता पार्टीमा फर्किइसकेका छन् । हिजोमात्र २ सय युवाहरु आउनु भयो । असाध्यै इमान्दार क्रान्तिकारी, जो हिजो पीएलएमा ठूलो जिम्मेवारी लिएर काम गरेका अढाई सय युवाहरु एकीकृत माओवादीमा फर्किदैछन् । त्यसकारण उहाँहरु अरु १ महिनासम्म बहिस्कार भनिरहनुभयो भने उहाँहरुसँग केही नेतृत्वका बाहेक कोही पनि रहँदैनन् । जनता र कार्यकर्ता कोही पनि रहँदैनन् । यसो भनिरहँदा मलाई उहाँहरु चुनावमा सहभागी नभएको दुःख छ, सहभागी हुनु पथ्र्यो । हामी मिलेरै चुनाव गर्नुपथ्र्यो । यो देशको आवश्यकता थियो । यो युगको आवश्यकता थियो । चुनाव प्रतिक्रियावादीलाई पराजित गर्ने र जनताको संविधान बनाउने राम्रो अवसर हो । त्यसमा उहाँहरु चुक्नुभयो । हामीलाई दुःख लागेको छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य केन्द्र तथा एमाओवादीको प्रमुख नेता रहनुभएका यहाँका बिपक्षमा आएका टिप्पणीलाई के भन्नुहुन्छ ?
जनयुद्धमा उनीहरुले किन हाम्रो टाउकाको मूल्य तोकेका थिए ? त्यतिखेर आफ्नो नेतृत्वलाई बचाउने कतिधेरै जनताले त्याग र बलिदान गर्नुप¥यो ? नेतृत्वलाई सिध्याउन पाए बिरुवा मै निमोठ्न पाइन्थ्यो भन्ने थियो । यिनै मान्छेहरु होइनन् टाउको झोलामा ल्याउ पैसा लैजाउ भन्ने ? अहिले विभिन्न मिडियामा जसले हाम्रा विरुद्ध झुठ्ठा र अनर्गल प्रचार गरेका छन्, जसको सिता खाई उसको गीता गाई भने जस्तो त हो । उनीहरुका सिता खाएका मान्छेहरुले त्यही गर्नु पर्छ । त्यसकारण म त्यसमा व्यक्तिगतरुपले उत्तेजित हुनुपर्ने, हरेक पटक प्रतिक्रिया दिनुपर्ने आवश्यकता देख्दिन । यो इतिहासको नियम अनुसार क्रान्तिको नियम अनुसार भइरहेको छ । जनताको तागत पुग्यो भने जनताले आफ्नो नेतृत्वको रक्षा गर्छन् । जनताको तागत पुगेन भने प्रतिक्रियावादीले सिध्याइदिन पनि सक्छन् । यो भिन्न रुपमा जनयुद्ध हो । माओत्सेतुङले भनेको कुरा म यहाँ सम्झन्छु– युद्ध रक्तपातपूर्ण राजनीति हो, राजनीति रक्तापातहीन युद्ध हो । त्यसकारण हामी अहिले शान्तिपूर्ण राजनीतिमा छौं, यो रक्तपातहीन युद्ध नै हो । म हाम्रा कार्यकर्ता र जनतामा के भन्न चाहान्छु भने– हिजो युद्धमा हामीलाई सखाप पार्न चाहान्थे, अहिले पनि सखाप पार्न चाहेका छन्, हिजो नेतृत्वको रक्षा गरेर नै अहिले संघीय गणतन्त्रमा हामी आइपुगेका छौं । अहिले पनि नेतृत्व रक्षा गरेर जनवादी क्रान्तिका कार्यभार पूरा गर्ने र समाजवादतर्फ जाने दायित्व हाम्रो अगाडि छ । मलाई जनताप्रति विश्वास छ, पार्टीका नेता–कार्यकर्ताप्रति विश्वास छ, हामी विजयी हुन्छौं ।
अन्त्यमा केही भन्न बाँकी छन की ?
हामी संविधानसभाको अन्तिम अथवा दोस्रो निर्वाचनको संघारमा पनि छौं । त्योभन्दा अगाडि नेपालीहरुको ठूलो चाड विजया दशमी, दिपावली, छठलगायतका ठूल्ठूला चाडहरु पनि हाम्रो अगाडि छन् । म यो निर्वाचनको सफलताका निम्ति आम जनतासँग हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहान्छु । यी सबै चाडहरुको उपलक्ष्यमा पनि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट देशभित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हार्दिक शुभकामना तथा बधाई दिन चाहान्छु । –कृष्ण सेन समाचार सेवावाट